Samsung Galaxy Note 2: ny isa andrasana, 20 tapitrisa | Androidsis
Samsung Galaxy Note 2, singa 20 tapitrisa no andrasana hamidy
Samsung dia mamaky ny firaketana momba ny varotra, ary na dia teo aza ny fitoriana momba ny patanty niaraka tamin'i Apple dia nisy vokany tsy nahitam-bokatra izany, ny orinasa Koreana dia tsy nijanona fa mbola manohy miloka avo ihany. Taorian'ny fametrahana ny dingana miaraka amin'ny Samsung Galaxy S2, ny finday avo lenta avo lenta manaraka dia namirapiratra ary nahatratra tarehimarika fivarotana nahagaga, ny tianay holazaina dia ny Samsung Galaxy S3.
Saingy tsy mijanona eo izy io, ankehitriny manantena i Samsung fa amin'ny fampielezan-keviny dokam-barotra sy ny fanohanan'ny mpanaraka ny marika ary ny mety lehibe, ny Galaxy Note 2 vaovao dia hamidy singa 20 tapitrisa. Toa olona ambony be izy io, saingy manantena i Samsung fa hahatratra azy io amin'ny fotoana firaketana.
Raha afaka nivarotra singa 3 tapitrisa tao anatin'ny 20 andro ny Samsung Galaxy S100, manantena izy ireo fa hampiakatra avo roa heny ny habetsaky ny varotra Samsung Galaxy Note tany am-boalohany miaraka amina modely vaovao amin'ity sehatry ny tsena tokana ity: phablets, fitambarana tablette sy smartphone miaraka amina efijery lehibe hery fanodinana mahagaga.
Eo amin'ny lafiny famolavolana dia efa niresaka izahay fa ny Samsung Galaxy Note 2 dia hanana sisiny mitovy amin'ny S3, fa ny mpijery izay tondroin'ny phablet dia hafa. Ho an'ireo izay mankafy maodely lehibe, misy efijery lehibe sy tohana ho an'ny stylus S Pen. Amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia azontsika atao ny manatanteraka ny karazan'asa rehetra mifandraika amin'ny fampiasana tablette ho an'ny finday.
Ny teboka iray manohana ny Samsung Galaxy Note 2 dia ny efijery misy azy, na dia lehibe aza, dia hanampy ny mpampiasa zatra hatsaran-tarehy mahavariana. Tato ho ato dia misy telefaona lehibe kokoa ihany koa ny telefaona finday, ka antenaina fa rehefa manandrana Galaxy Note 2 izy ireo dia tsy te hiverina any amin'ny finday kely kokoa.
Ny efijery an'ny Samsung Galaxy Note 2 dia ho 5,5 santimetatra, hananana kinova misy fahatsiarovana fitehirizana 16 sy 32 GB ary fikirakirana quad-core amin'ny haavo 1,6 GHz. Ity dia kinova matanjaka kokoa an'ny iray izay efa tena tsara Samsung Galaxy S3, ary i Samsung dia matoky fa hahatratra ny varotra avo dia avo amin'ity sainam-pirenena ity - takelaka izay manomboka miseho matanjaka eny an-tsena.
Fanazavana fanampiny - Samsung Galaxy Note II dia manao fampisehoana ofisialy
Rohy - PhoneArena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy Note 2, singa 20 tapitrisa no andrasana hamidy
Fako dia hoy izy:
Tiako ilay pejy, mamporisika anao hiditra eto aho http://divertyzone.comuf.com/
Mamaly ny fako
Samsung Galaxy S, Rom Miui V4.1 Jelly Bean Manyopoli83 kinova 2.9.7